Toetran'ny toetr'andro Netatmo, fanadihadiana ary hevitra | Androidsis
Toetran'ny toetr'andro Netatmo, fanadihadiana ary hevitra
Tiako ny tontolon'ny mandeha ho azy ao an-trano. Izao tontolo izao tsy mampino izay miha manakaiky sy akaiky kokoa ireo mpanamboatra izay manolo-tena hanome vahaolana feno amin'ny vidiny azon'ny ankamaroan'ny mpampiasa ampiasaina. Ary ohatra iray mazava ny Netatmo.
Efa nilaza taminay ny momba azy izahay fakantsary mahery Netatmo Welcome, fitaovana ahafahantsika manara-maso ny hetsika rehetra avy amin'ny finday avo lenta Android na takelaka noho ny fampiharana feno azy. Izahay dia mitondra anao a Famakafakana ny tobin'ny toetr'andro Netatmo, fitaovana iray tena feno tsy ampoizina noho ny hahamora azy rehefa mametraka sy mampiasa azy satria hofehezinao ny masontsivana rehetra avy amin'ny telefaona na takelakao.
1 Ny tobin'ny toetrandro Netatmo dia miavaka amin'ny famolavolana manintona sy ny fampiasana azy mora foana
2 Fanokafana ny tobin'ny toetr'andro Netatmo
3 Toy izao no fiasan'ny tobin'ny toetrandro Netatmo
4 Netatmo dia manampy antsika hibodo ny tranontsika
Ny tobin'ny toetrandro Netatmo dia miavaka amin'ny famolavolana manintona sy ny fampiasana azy mora foana
Ho an'ny famakafakana an'ity vokatra ity, avy amin'ny Netatmo dia nanome ahy ny kitapo feno izay misy eo amin'ny lafiny iray amin'ny tobin'ny toetr'andro Netatmo ary amin'ny lafiny iray koa fandrefesana orana sy anemometra, raha fintinina fonosana feno hanaraha-maso ny angona meteorolojika rehetra.
Ny fahatsapana voalohany rehefa manokatra ny vokatra dia ny mpanamboatra no nikarakara ny antsipiriany farany rehetra; samy manana ny rafi-pandrefesana ireo peripheraly ireo ny refin'ny orana sy ny anemometra Ohatra, nampiasa ny rafitra flange ahazoana aina aho mba hametahana ireo gadget roa nefa tsy mila mandoko ny rindrina. Mora sy tsotra.
Ny Netatmo Anemometer sy Rain Gauge dia fitaovana roa maivana indrindra, vita amin'ny polycarbonate avo lenta ary manome fahatsapana fahamendrehana lehibe izy ireo rehefa voatazona. Afa-tsy ny afovoany afovoany, izay horesahiko avy eo, ny fitaovana rehetra manodidina ny tobin'ny toetr'andro Netatmo dia miasa miaraka amin'ny bateria ary mila milaza aho fa ny rafitra malina hametrahana ny bateria dia ho an'ny ety ivelany sy ho an'ny refy orana ary anemometatra. toa tena mahazo aina sy mandaitra.
Ho fanampin'izay, na ny singa anatiny sy ivelany an'ny tobin'ny toetr'andro Netatmo Manana famaranana tena premium izy ireo. Ny endriny vita amin'ny varingarina dia vita amin'ny vatan'ny alimika anodized, manome fijery tena faran'izay tsara amin'ireo fitaovana roa ireo. Noho ity famolavolana manintona sy maoderina ity dia azontsika atao ny mametraka ny efitrano anatiny na aiza na aiza ao an-trano nefa tsy mifandona.
Amin'ny tranga vondrona ivelany izany, araka ny hitanao, kely kokoa, amin'ity tranga ity dia tsy dia zava-dehibe loatra ny fisehoana na dia manintona be aza. Tiako ihany koa ny rafitry ny vatofantsika misy azy, mora apetraka ary mahazaka, ankoatry ny mekanika hampidirana ireo batery.
Satria ireo fitaovana ireo dia tsy mampiasa karazana takelaka fampandrenesana, fa anananay izany fampiharana Netatmo feno. Satria tsy misy takelaka, natahotra aho sao tsy fantatro raha napetraka tsara ny batery, saingy nieritreritra ny zava-drehetra ny ekipa mpamolavola Netatmo ary nampiditra LED kely tao amin'ny faritra ivelany, ny refy orana ary ny anemometatra izay hanondro miasa tsara ilay fitaovana.
ihany koa ny singa lehibe dia manana LED lehibe mihazakazaka manaraka azy manontolo ary mirehitra izany rehefa mifandray ary miovaova ny lokony arakaraka ny haavon'ny CO2 ao an-trano. Tena ilaina sy maro loko. Amin'ity lafiny ity, tsy afaka mitsikera na inona na inona aho satria toa tsara ho ahy ny famolavolana ny singa rehetra ao amin'ny tobin'ny toetr'andro Netatmo, miaraka amina fonosana tonga lafatra sy andiana kojakoja izay manamora ny asa rehefa mametraka ireo fitaovana Netatmo samihafa. Ny fehin-kevitra momba izany dia ny mpanamboatra manolotra vokatra tsara kalitao, miaraka amin'ny famaranana tsara ary amin'ny fonosana tonga lafatra izay manamora ny fametrahana ireo singa samihafa ao an-tranonao.
Fanokafana ny tobin'ny toetr'andro Netatmo
Nisafidy Netatmo a Rafitra plug and Play izay mamela ny fitaovana rehetra hiasa vetivety. Ary ny mekanika hampiasana ny tobin'ny toetr'andro manontolo an'ny mpamokatra dia tena tsotra, ary ao anaty boaty tsirairay amin'ireo singa dia misy famintinana ireo dingana manaraka.
Mba hanaovana izany, ny zavatra voalohany hataontsika dia ny mampihetsika ny gara lehibe, izay fitaovana varingarina lehibe indrindra. Manaraka ireo dingana tonga ao amin'ny boky torolàlana ary amin'ny famintinana dia misy ny fampifandraisana ny singa ao anaty amin'ny mains amin'ny alàlan'ny fifandraisana USB micro misy azy, ampifanaraho amin'ny rindranasa Netatmo napetraka ao amin'ny finday avo lenta na ny takelaka misy antsika ary ampifandraiso ny tamba-jotra Wi-Fi, dia hampavitrika ilay singa isika.
Ankehitriny dia mila mampifanaraka azy fotsiny amin'ny singa ivelany isika ary efa manana fitaovana roa mifandray sy amin'ny fahafaha-miasa tanteraka. Amin'ity singa ity dia tsy nanana olana aho tamin'ny fampiasana ny tamba-jotra Wi-Fi ahy saingy niaraka tamin'ny fakantsary Welcome aho dia nanana olana aho ary tsy maintsy nametraka ny masontsivana amin'ny tanana aho, fa aza manahy fa tsy sarotra izany. Ho fanampin'izay, Netatmo dia manana mailaka ifandraisana raha mila fanohanana ianao na inona na inona karazany.
Farany, ny sisa hataonao dia ampandehano ny refin'ny orana sy ny anemometer, amin'ity tranga ity, dia atao amin'ny alàlan'ny fampiharana napetraka amin'ny telefaona finday na tablety, mampihetsika ireo kojakoja roa ireo ao anatin'ny minitra vitsy. Ny fitaovana rehetra dia apetraka amin'ny toerany ara-jeografika mba hananana fampahalalana marina momba ny toetrandro momba ny faritra misy antsika.
Raha ny amiko, manana a kaonty Netatmo miasaTsy voatery hisoratra anarana aho, fa raha mpampiasa vaovao ianao dia tadidio fa tsy maintsy mamorona profil ao amin'ny tranokala ofisialin'ny mpanamboatra ianao mba hahafahanao mampiasa ny rindran'izy ireo sy miditra amin'ireo mason-tsivana rehetra misy eo amin'ny tobin-toetrandro misy anao amin'ny solosaina rehetra.
Tsara homarihina fa afaka manampy modely anatiny telo fanampiny koa isika hifehy, ohatra, ny mari-pana na ny haavon'ny CO2 ao amin'ny efitran'ireo zanatsika.
Toy izao no fiasan'ny tobin'ny toetrandro Netatmo
Raha vantany vao tafangona ny zava-drehetra, tonga ny fotoana hahitantsika ny fomba fiasan'izy io. Ary efa nolazaiko anao izany Miasa tsara ny tobin'ny toetrandro Netatmo. Hanombohana azy, na ny fampiharana na ny tranonkala dia manana interface intuitive tena ho azontsika ampiasaina ao anatin'ny fotoana fohy. Mazava ho azy fa na dia notsorina be aza ny zava-drehetra, ny tobin'ny toetr'andro Netatmo dia manome fampahalalana marobe.
Ny pejin'ny fampiharana dia ny hanananay ny fampahalalana lehibe. Amin'izany no ahitantsika ny maripana antonony ao an-tranontsika, ankoatry ny faran'izay avo sy ambany indrindra, haavon'ny hamandoana, tabataba ary koa ny CO2, manavao ny vaovao isaky ny 5 minitra.
Mampino marina? Mbola misy bebe kokoa noho izany Rehefa miakatra ambonin'ny 2 ppm ny haavon'ny Co1000 dia handefa fampandrenesana ho antsika ny gara ary ho mavo ny LED. Andininy ankasitrahako hatramin'izay, azontsika atao ihany koa ny manamboatra mba hahatratraran'ireny karazana fampandrenesana ireny raha tiantsika. Ankoatr'izay, amin'ny alàlan'ny fanindriana ny fitaovana anatiny, satria mihetsika ny any ivelany, dia halefany ho antsika ny famintinana ny toe-javatra misy ankehitriny na ao anatiny na ivelan'ny trano.
Ary ny tapany ambony amin'ny vakizoro lehibe an'ny fampiharana no hananantsika ny ankamaroan'ny angona avy any ivelany, toy ny mari-pana farafahakeliny sy farafahakeliny, mari-pana ankehitriny, fahatsapana hafanana, haavon'ny hamandoana, tsindry, mety hisian'ny orana. .. Safidy tsy manam-petra izay hahafaly ny mpampiasa azy rehetra satria ny fanazavana rehetra dia nohazavaina tamin'ny fomba tsotra sy mora tantana. Ary miharihary Afaka mahita vinavina isika mandritra ny 7 andro manaraka.
Ary farany, marihina fa Netatmo dia manana tamba-jotra goavambe, Netatmo Weather Map, mandrafitra tobin-toetrandro an'arivony an'arivony marika ary manana angon-drakitra avy amin'ny faritra rehetra. Efa nolazaiko anao fa lehibe be ny sari-tany. Eny, lehibe tokoa mba ho sarintany vokarin'ny mpampiasa manerantany indrindra.
Netatmo dia manampy antsika hibodo ny tranontsika
Mety manontany tena ny sasany aminareo: okay, tena feno ny tobin'ny toetr'andro Netatmo, fa inona no ifandraisan'izany rehetra izany amin'ny mandeha ho azy ao an-trano? Eny, ny manomboka afaka mifehy ireo masontsivana rehetra ireo amin'ny findainao na ny takelakao dia dingana lehibe sahady. Raha ampiantsika amin'izany fa ny fonosana iray manontolo dia manome vaovao marobe feno habibiana ahafahantsika mamorona hetsika arak'izay ampandrenesin'ny vanim-potoana antsika, toy ny fahafantarana fa tsy maintsy manapaka ny fandroana zaridaina isika satria avy ny orana na ny fanokafana ny varavarankely hamelona ny rivotra Ny trano, raha misy ambaratonga Co2 avo lenta, dia mampiseho ny isan-karazany azo aroson'ity gara mahaliana ity.
Marihina fa ny tobin'ny toetrandro Netatmo, toy ny tsipika vokatra iray manontolo, dia azo ampifandraisina amin'ny serivisy IFTTT izay ahafahantsika mamorona andiana fanairana na hetsika rehefa misy tranga iray miseho: Inona ny tontolo iainana ao an-tranonao ambanin'ny ambaratonga sasany ? Eny, hafanaina ho azy ny fanafanana. Na hahazo fampahatsiahivana ianao hamono ny rafitra fanondrahana satria toa rahampitso dia avy ny orana.
Izaho dia efa fitsapana ireo singa rehetra mandritra ny iray volana mahery ary ny tena marina dia tena tsara tokoa ny fahatsapana. Tsy dia liana loatra tamin'ny tontolon'ny toetr'andro mihitsy aho fa rehefa avy nanara-maso paramètre marobe, mifehy ny soatoavina toy ny mari-pana ao an-trano na, maninona no mandà izany, aza misalasala amin'ireo namako momba ny fahaizan'ny rivotra nampiseho ny tranoko azy ireo Co2 level, mila milaza aho fa tena nanampy ahy io.
Ary rehefa dinihina fa ny Toeram-pivarotana toetrandro Netatmo, ao anatin'izany ny efi-trano sy ivelany, c145 euro izao ny vidiny any Amazon, ankoatra izany 99,79 euro ho an'ny anemometer y 65.94 ho an'ny refin'ny orana, Toa vidiko mirary tokoa izany amiko raha raisintsika ny fahafahan'ny vahaolana Netatmo vaovao.
Galerie Image Station Netatmo Weather Station
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » hevitra » Toetran'ny toetr'andro Netatmo, fanadihadiana ary hevitra
BlackBerry dia manamarina ny fisian'ny keyboard ara-batana ho an'ny terminal akaiky
Ireo sary ireo dia mampiseho amintsika izay zavatra tsy azontsika tamin'ny Project Ara